Kedu ihe ịchọrọ enyi nwanyị maka mgbe ị nwere igwe kwụ otu ebe?: Nke a bụ otu n'ime gburugburu ịgba agba ịgba agba, na-atụ aro igwe kwụ otu ebe maka ndị na-agba agba ọnọdụ, ebe ọ bụ ihe dị oke mkpa karịa nlekọta, ọkachasị igwe kwụ ọtọ, oke mkpa. ịrụ ọrụ kwa ụbọchị, nwere ike rụpụta nnukwu arụmọrụ, ogologo ọrụ ọrụ, ọkwọ ụgbọ ala na-enwe obi ụtọ
A na-emegharị ike nke nkwụkwụ site na naanị akpụkpọ ụkwụ gaa na ụkwụ, mgbe ahụ agafere agbụ ahụ na flywheel site na diski ezé. Flop na-agafe ike site na ọnụ na mpe mpe nke mpe mpekere ahụ, ma na-esite ike na mgbapụ. Otu a ka ogwe aka onye azumahia si agbanwe di na ọsọ.Mgbe isi nke ike mbufe, usoro mbufe na emetuta ogo oru ya ugboro.
N’ime ngagharị ụbọchị, silsila bụ ihe kachasị emetọ gburugburu ebe obibi, dịka isi ihe na - eme ka ala ahụ dị n ’ala: mmanụ pịkọlị, nsonaazụ ya dị mfe mmetọ site n’ájá, ájá ahụ na - efe efe n’usoro ikuku mbufe, na - ebute nsonaazụ niile. ike iguzogide, ịba ụba ụzụ, akụkụ akwara ngwa ngwa na-emetụta ọnọdụ ịnya.
Ride gachaa nke ọ bụla, were akwa dị ọcha kpuchie yinye ahụ, gbanye ihe ndị ahụ site na klọọkụ, ma hichapụ ájá dị n’elu yinye. Idobe yinye ọcha bụ ntọala iji hụ na nnyefe sistemụ ahụ dị ọcha. N’ịgbakwunye, dabere na ọnọdụ ịnya ụgbọ elu dị iche iche, nhicha ọfụma na usoro zuru oke, ma tinye mmanụ mmanụ maka lubrication. nkwupụta ndụ (ogologo), ọ bụrụ na ọ baghị, mgbe ahụ oge ị nụrụ mkpọtụ na-esite n’agbụ bụ mgbe ịkwesịrị ịsacha ma mmanụ.
Usoro ọsọ na-agbanwe
Dị ka sistemụ nnyefe, usoro nnyefe dịkwa mkpa ka edobe ya ọcha oge niile, gụnyere flywheel, wheel ntuziaka, diski ezé, ma ọ bụrụ na mmanụ kpuchie akụkụ ndị a, a ga-emetọ ya na ntụ, na-ebute mbufe na-ezighi ezi, mkpọtụ, osooso. na-eyi nsogbu, mmezi kwa ụbọchị, ị paya ntị na nhicha nke oge.
Dịka ụzọ kachasị mkpa maka nchekwa iji rụọ ọrụ maka nchekwa, usoro braking kwesịrị ka nyocha nke ọma na onye na-agba ya tupu ịgagharị na mgbe ọ gachara.
Breeki tumadi site na breeki mwepu sere (ma ọ bụ kpalie) mmachi, na-eme ka ajị anụ ahụ metụtara n'akụkụ breeki ahụ, dabere na esemokwu dị n'etiti breeki abụọ ahụ, na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ọ dị mkpa ilele ma breek mgbatị ahụ (ọ daa n'ala) ma ọ bụ dochie nke ọma, bọketị bụ kọntaktị mbụ na ala ọdịda n'obosara breeki aka), ka ị ghara inwe mgbaji mebiri emebi mgbe ọ ga-adọrọ na mberede.
Nke ahụ bụ eriri eriri, breeki kwesịrị inyocha ma ọ bụ mkpọchi eriri igwe na-emechi emechi, breeki nrụgide kwesịrị ịchọpụta ma ọkpọkọ mmanụ adịghị, ọ nweghị mgbapụta mmanụ; ma ọ bụrụ na uwe ahụ akarị iji dochie anya n’oge
; N'ikpeazụ, rim, lelee ma breeki nke dị n'akụkụ ya dị larịị, dị ọcha, enweghị mmanụ, diski breeki bụ otu.
Ọnọdụ nke isi ekweisi bụ mpaghara akara nke ejiri akara, yana iji ya kwa ụbọchị chọrọ obere mmezi. Ihe kwesiri ilebara anya bụ na n’ụbọchị mmiri na-ezo ma ọ bụ mgbe ọ gbachara okporo ụzọ dị ọcha, wiil na-aga n’ihu ga-atụba mmiri apịtị n’ime oghere dị n’etiti ọkwa otu dị n’ihu. N'oge a, ọ dị mkpa iji kpoo isiisi ahụ oge ọ bụla ma tụgharịa mmanụ iji mee ka ọ kpọọ nkụ ma dochie ya
Dịka akụkụ kachasị mkpa nke ịgba ịnyịnya ígwè, a ga-agbado ụkwụ taya maka nnyefe, braking, na nkasi obi, yabụ ọ ga-abara uru ị attentiona ntị na ndozi kwa ụbọchị. Tupu oge a, mgbe ị garịrị, lelee ma onwere mba ọzọ dị na taya ahụ. elu, ọkachasị iko ite, okwute, wdg, ọ bụrụ na enwere, hichaa ya n’oge, lelee ma enwere mmerụ ahụ nke ogwe taya.
N'ikpeazụ ịcha n'aka, ọ bụrụ na iji enyemaka ihe eji eme ihe nwere njikọ anya igwe anaghị elele oge dị mkpa, ọ dịkwa mkpa ka ịmechaa nhicha, ọ na-eme oge niile iji zere mkpagbu ma ọ bụ bọtịnụ na-ewuli elu na-enweghị mmetụta, ma ọ bụ karịa emetụta ya njem ụgbọ elu nchekwa, na mgbakwunye, oge ọ bụla chetakwara imelite n’oge, ọkachasị tupu ọzụzụ ọ bụla nke na - emebibeghị njem na - eme njem dị anya iji budata maapụ eserese ndị dị mma dịkwa oke mkpa.
Mountain Bike , Mountain Bike Na-ekpo ọkụ , Balamụaka Balance Bike , Mountain Bike Si China , Fat Tire Mountain Bike , Bike ugwu Mountain Bike ,